Shiinaha Tafaariiqda hore ee alaabada soo saareyaasha iyo alaableyda | Zhengcheng
Faa'iidooyinka calaamadda hore ee dukaanka tafaariiqda ee Zhengcheng
1.Dhimista kharashka adeegsiga calaamadaha (qaab dhismeedka patent-kaydinta tamarta / dhimista kharashka dayactirka / cimri dhererka adeegga).
Alaabooyinkeenu 2.Waxay fududahay in la rakibo oo la qaato qaab dhismeedka dayactir la'aan, kala-goys la'aan ah, dayactirkuna fududeeyo.
Naqshadeynta qaabdhismeedka qalooca ayaa si buuxda u xoojinaya xasilloonida qaabdhismeedka iyo caabbinta foosha ee sanduuqa nalka.
4.V-qaabeeya iftiinka 45-ka soo-saarista iftiinka ayaa keenay wax soo saar laydh (patent), si tamarta iftiinka si hufan loogu isticmaali karo.
5. Wax soosaarka qaabdhismeedka ah iyo keydinta ayaa ka dhigaya mid dhakhso leh in la dhiso bakhaarro.
6.Midab caan ah oo muuqda iyo muuqaal, waayo-aragnimo muuqaal oo saddex-cabbir ah.
7.Degga khaaska ah ee isbarbar dhigayaa waa mid quruxsan oo qurux badan, isla markaana ka ilaalinaya tabeellaha qashinka.
Naqshadeynta barta iftiiminta horumarsan waxay ogaaneysaa milicsiga labaad ee tamarta iftiinka waxayna sare u qaadeysaa isticmaalka ilaha iftiinka. Marka loo barbardhigo sanduuqyada iftiinka dhaqameed, Zhengcheng sanduuqyada fudud ee keydinta tamarta ayaa badbaadin kara 65% korantada.
Iftiinka tuubada iftiinka ee loo adeegsaday sanduuqa nalka Zhengcheng ee keydinta tamarta ayaa 2.3 jeer ka badan kan caadiga ah ee tuubada iftiinka.
Heerarka xulashada maaddada adag iyo qaabeynta qaabdhismeedka farsamaysan ayaa lagu gaarayaa hubinta tayada toban sano ah
Naqshad dhismeedka qaabdhismeedka xariifnimada:
Beddelka tuubada iftiinka ee sanduuqa nalka Zhengcheng ee keydinta tamarta waa mid aad u fudud oo habboon. Kaliya waxay qaadataa 5 daqiiqo iyo afar tallaabo si loo beddelo nalka. Uma baahna qalab caawinaad ah ama kala fur sanduuqa iftiinka, taas oo si weyn u yareysa dhibaatada dayactirka.
Hore: Calaamadee banaanka looxa oo looxaro loogu talagalay dukaanka ku habboon dukaanka
Xiga: Dukaan Hore U Saxeex Bakhaarka KH24H
Vacuum U samaynta Sanduuqa Nalalka Nalalka, Saxiixa Boodhka Nalalka Nalalka ah, Calaamadaha Iftiiminaya, Bannaanka Laydhka Bannaanka Saxeexa, Saxeex Farmashiyaha, Calaamadaha Xayeysiinta,